စစ်တပ်ကို အရင်​ပြောင်း​ပါ – အီဂျစ်သင်ခန်း​စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စစ်တပ်ကို အရင်​ပြောင်း​ပါ – အီဂျစ်သင်ခန်း​စာ
Posted by ရွှေဘိုသား on Aug 24, 2011 in Copy/Paste |6comments
“အီဂျစ်ပြည်သူ ​တွေနဲ့​ စစ်တပ်နဲ့​ ဆက်ဆံ​ရေး​က​တော့​ ကိုယ့်​ကို လိမ်​နေညာ​နေမှန်း​ သိ​ပေမယ့်​ သား​တွေ၊​ သမီး​တွေရဲ့​ မျက်နှာကို ငဲ့​ပြီး​ ဘာမှ မ​ပြောရဲတဲ့​ ဇနီး​သည်လို​ပေါ့​” လို့​ အီဂျစ်လူမျိုး​ နာမည်​ကျော် လူရွှင်​တော် အဒမ် အက်ဘ်ဒဲလ် ဆာလမ် (Adham Abdel Salam) က ဥပမာ​ပေး​ပါတယ်။
ရင်နာစရာ​ တွေကို ဟာသလုပ်ပစ်တတ်တာ အီဂျစ်လူမျိုး​တွေရဲ့​ ဓ​လေ့​လို့​ ဆိုပါတယ်။
“သွား​ပါ​တော့ ​ဗျာ။ ကျ​နော်တို့​ စာကြည့်​ရဦး​မယ်”
“မူဘာရတ်သွား​ ကို သွား​နုတ်​ပေး​ဖို့​ သွား​ဆရာဝန် ​ရောက်​နေပါပြီခင်ဗျာ” ဆိုတာမျိုး​။
နောက်သ​ ရော်ချက်တခုက​တော့​ ပုံပြင်ဆန်ပါတယ်။
“တရား​ရုံး​ တွေက ကျမတို့​ရဲ့​ အခွင့်​အ​ရေး​ကို မ​ပေး​ဘူး​ဆိုရင်၊​ ​နောင်မှာ လက်နက်ကိုင် ဆန့်​ကျင်တဲ့​အုပ်စု​တွေ၊​ လုပ်ကြံမှု​တွေ ​ပေါ်လာရင် အဆိုး​မဆိုကြပါနဲ့​” လို့​ ​ရေး​လိုက်ပါတယ်။ ဒီအ​ရေး​အသား​ကြောင့်​ စစ်တပ်ကို ​စော်ကား​မှု၊​ လက်နက်ကိုင်အုံကြွမှုဖြစ်​အောင် လှုံ့​ဆော်မှုတို့​နဲ့​ တရား​စွဲခံရပါတယ်။
ပြည်တွင်း​ ပြည်ပက ကျယ်ကျယ်ပြန့်​ပြန့်​ ​ဝေဖန်တာရယ်၊​ ​နောက်ထပ် မ​ကျေနပ်ချက်​တွေကို ဆွ​ပေး​သလို ဖြစ်မှာစိုး​တာရယ်​ကြောင့်​ ဩဂုတ် ၁၈ ရက်မှာ​တော့​ တရား​ရုံး​က သူ့​ကို အာမခံနဲ့​ ပြန်လွှတ်​ပေး​လိုက်ပါတယ်။
အ​ကြောင်း​ ရင်း​တခုက​တော့​ အီဂျစ်ရဲ့​ စီး​ပွား​ရေး​လောကမှာ အနည်း​ဆုံး​ ၅ ရာခိုင်နှုန်း​က​နေ ၃၀ – ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း​အထိ စစ်တပ်က လက်ဝါး​ကြီး​အုပ်ထား​တာ ​ကြောင့်​ပါ။ ​လေဆိပ်က​နေ ကိုင်ရိုမြို့​ထဲကို ကား​မောင်း​သွား​ရင် တလမ်း​လုံး​က မြင်မြင်သမျှ မှန်အပြည့်​ကာထား​တဲ့​ အ​ဆောက်အဦ​တွေ၊​ ပန်း​ပင်အုံ့​အုံ့​၊​ ခြံဝင်း​ကျယ်ကျယ်အိမ်​တွေ အား​လုံး​ကို စစ်တပ်အရာရှိ​တွေ ပိုင်ကြပါတယ်။ စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ​တွေက ​ရောင်း​ချတာ​တွေက​တော့​ မီး​သတ်ဘူး​၊​ ​ဆေး​ခန်း​သုံး​ကိရိယာ၊​ လက်​တော့​ပ်ကွန်ပျူတာ၊​ တယ်လီ​ဗေး​ရှင်း​၊​ အဝတ်​လျှော်စက်၊​ ​ရေခဲ​သေတ္တာ၊​ ဟင်း​ချက်အိုး​ခွက်၊​ ​ရေသန့်​ဘူး​၊​ ဂက်စ်အိုး​၊​ သံလွင်ဆီအထိ အကုန် သူတို့​ချည်း​ပါပဲ။
လက်​တွေ့​မှာ​ တော့​ ​လော​လောဆယ်မငြိမ်သက်မှု​တွေ​ကြောင့်​ ကမ္ဘာလှည့်​ ခရီး​သွား​တွေ အီဂျစ်ကို ​ခြေဦး​ပြန်လှည့်​ဖို့​ မရှိ​သေး​သလို၊​ လာမယ့်​နှစ်မှာ နိုင်ငံစီး​ပွား​ရေး​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်မှု ၁ ရာခိုင်နှုန်း​တောင် ကျသွား​နိုင်​သေး​တယ်လို့​ IMF နိုင်ငံတကာ​ငွေ​ကြေး​ရန်ပုံ​ငွေအဖွဲ့​ က ခန့်​မှန်း​ထား​ပါတယ်။ တဘက်မှာ နိုင်ငံဘဏ္ဍာ​ငွေထဲက စစ်တပ်အတွက် အသုံး​စရိတ်ကို ​ဒေါ်လာဘီလီယံချီ (​ဒေါ်လာသန်း​ထောင်ချီ) (အတိအကျဘယ်သူမှ မသိ)၊​ အသုံး​ပြု​နေရသလို၊​ စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ​တွေက အခွန်မ​ဆောင်ကြပါဘူး​။ အလုပ်အကိုင်မရှိတဲ့​ အရပ်သား​တွေကိုလည်း​ စစ်တပ်ကုမ္ပဏီက အလုပ်မခန့်​ပါဘူး​။ ဒါ​ကြောင့်​ စစ်တပ်ကုမ္ပဏီ​တွေဟာ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီး​ပေး​ဖို့​ အဓိက ​မောင်း​နှင်အား​ဖြစ်တဲ့​ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့​ဖြိုး​ဖို့​လမ်း​မှာ အဟန့်​အတား​ဖြစ်​နေပါ​တော့​တယ်။ တဘက်မှာလည်း​ စစ်တပ်က စီး​ပွား​ရေး​ကဏ္ဍမှာ ခြယ်လှယ်ခဲ့​တာကြာခဲ့​ပြီဖြစ်တဲ့​ အတိုင်း​ သူတို့​ရဲ့​ စီး​ပွား​ရေး​လက်​ဝေခံ​တွေ၊​ လက်ရှိ ဒီမိုက​ရေစီမဟုတ်တဲ့​စနစ်မှာ အဆင်​ပြေ​နေတဲ့​ စီး​ပွား​ရေး​သမား​ထောင်ဂဏန်း​ ကလည်း​ရှိ​နေပါတယ်။ ဒီလူအုပ်ကြီး​ကလည်း​ ​ခြေကုပ်ရထား​ပြီး​သား​ ဒီစနစ်ကို ပိုပြီး​ခိုင်မြဲ​အောင်၊​ သူတို့​လုပ်ပိုင်ခွင့်​တွေ ပိုပိုကျယ်လာ​အောင် စစ်တပ်အား​ကိုး​နဲ့​ ချဲ့​ယူကြပါဦး​မယ်။
သေချာတာတခုက​ တော့​ စစ်တပ်ကို အရင်မ​ပြောင်း​လဲဘဲ ဒီမိုက​ရေစီအသွင် ကူး​ပြောင်း​ရေး​ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး​ဆိုတဲ့​ အချက်ပါပဲ။ ၀ မရှိဘဲ ဝိ လုပ်လို့​မရတဲ့​ သ​ဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အကျပ်အတည်း​ အ​ခြေအ​နေမှာ အီဂျစ်လူမျိုး​တွေရဲ့​ ဗီဇအတိုင်း​ပဲ ​နောက်ထပ် ​ရှေး​ရိုး​စကား​ပုံတခု ​ပေါ်ထွက်လာပြန်ပါတယ်။
အီဂျစ်စကား​ ပုံအရ ဒီမိုက​ရေစီအသွင်ကူး​ပြောင်း​ရေး​ဆိုတာ ​မြွေနဲ့​ ကင်း​မြီး​ကောက် (အဆိပ်ရှိတဲ့​ အ​ကောင်နှစ်​ကောင်) ကို တပြိုင်တည်း​ ရင်ဆိုင်ရလို့​ အန္တရာယ်များ​လွန်း​လှ ပါတယ်။
ကျနော် ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဆိုဒ်ကနေဖတ်မိလို. ကျနော်တို.နဲ.လည်း ထပ်တူကျနေလို. ဖတ်လိုက်တာ
ကြိုက်လို.တင်ပေးလိုက်တာပါ ဖတ်ပြီးသား ရွာသားတွေကိုတော. အချိန်အောင်လုပ်မိလို. တောင်းပန်ပါတယ်
စာမူတင်ထားထဲ.မူရင်းတင်ထားတဲ.သူကတော. ကို နေသွင်
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရတော့မယ်ဆိုပြီး စီးပွားဝင်ရှာကြဖို့ လှုံ့ဆော်သူများ ဖတ်သင့်တဲ့စာပါ။ (သဂျီး ရှေ့ဆုံးကပါတယ်..)
မတရားတဲ့နည်းနဲ့ အာဏာယူထားတဲ့သူ၊ အခွင့်အရေးရနေတဲ့လူက လွယ်လွယ်နဲ့တော့ လက်မလွှတ်ချင်ပါ..။
လွတ်လပ်ရေးမရခင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘ၀က ကိုအောင်ဆန်း British Labour Party မှ Stafford Cripps ကို ပြောသလို `သူများယူထားတဲ့ ကိုယ့်ဘောပင်ကို အသာတကြည်တောင်းတယ်..၊ ပြောလို့မှ မရယင် အတင်းဆွဲလုယူပါတယ်…´ ယူထားတဲ့သူလည်းအိတ်ပြဲ၊ တောင်းတဲ့သူလည်းလက်နာတတ်ပါတယ်..။
ပြည်သူတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်၊ အာဏာတွေကို မလိမ့်တပတ်ယူထားရင် အသာတကြည်ပြန်ပေးဖို့ ကောင်းပါတယ်…။
ဒါမှမဟုတ် အတင်းယူရရင် အများပြည်သူတွေလည်း ထိခိုက်၊ အာဏာရှင်နဲ့ သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေလည်း ဇာတ်သိမ်းမကောင်းတတ်ပါကြောင်း..။ သင်ခန်းစာယူကြပါ..။
”မင်း(ဘုရင်)ချိန်ခွင်ကိုင်ရင် တိုင်းပြည်ပျက်တယ်” ဆိုတဲ့စကား၇ှိတယ်မှုတ်လား။ ဒီမှာကတော့ ချိန်ခွင်ရော၊ အာဏာပါ ၂မျိုးလုံးကိုင်ထားတာဆိုတော့ရင် ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်သိတော့ပါဘူး။
စစ်တပ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လက်တွေ့ကျကျ လုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စ – demilitarization…
မနေ့ ကတော့ တိုင်းပြည်ကို နှစ်လေးဆယ်ကျော် အုပ်ချုပ်လာတဲ့ အာဏာရှင် ဂဒါဖီတော့ ခွေးပြေး ဝက်ပြေး ပြေးလေပီ။အမှားပေါင်းမြောက်မြားစွာကို သိသိကြီး ကျုးလွန် ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတော့ ခုထိကို မျက်နှာပြောင်နေတုန်းပါလား။